Samsung no mpanamboatra smartwatches faharoa lehibe indrindra tamin'ny telovolana voalohany 2020 | Androidsis
Na dia tsy Apple no mpanamboatra voalohany nandefa smartwatch teny an-tsena, raha ny marina dia iray amin'ireo farany izy io, hatramin'ny nanombohany, isan-taona, mandefa kinova vaovao misy fanatsarana mahaliana ary androany dia nanjary smartwatch tsara indrindra misy eo an-tsena izy izao.
Samsung, izay niditra an'ity sehatra ity talohan'ny Apple, ampahefatry ny iray hafa dia mbola mitohy mitandrina ny faharoa toerana ao amin'ny lisitry ny mpanamboatra izay mivarotra ny smartwatches indrindra isan-taona. Raha ny angona farany navoakan'ny Strategy Analytics, Samsung dia nandefa smartwatches 1.9 tapitrisa nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2020.
Nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2019, nametraka smartwatches 1,7 tapitrisa teny an-tsena i Samsung, na izany aza. ny haben'ny tsena an'ny orinasa Koreana dia nitombo hatramin'ny 14,9 ka hatramin'ny 13,9% tamin'ny taona lasa. Amin'ny toerana voalohany hitantsika, mazava ho azy, Apple, izay nametraka Apple Watch 7,6 tapitrisa teny an-tsena nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020, ho an'ny 6,2 tapitrisa tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2019.
Io fitomboan'ny varotra io, tsy toy ny Samsung, dia namela mampitombo ny anjaranao amin'ny tsena, izay nanomboka tamin'ny 54,5% tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 55,5% androany. Ao amin'ny laharana fahatelo amin'ity laharana mpamokatra finday avo lenta ity no ahitantsika an'i Garmin, miaraka amina tsena 6% aorian'ny fivarotana intelikelika 1.1 tapitrisa.
Araka ny filazan'i Steve Waltzer, mpandinika ny Strategy Analytics izay namoaka ity tatitra farany ity:
Samsung dia mijanona ho mpamatsy smartwatch laharana XNUMX manerantany, saingy ny fitomboany dia nihena noho ny fanidiana ny coronavirus tao amin'ny fireneny, Korea Atsimo, ary ny fifaninanana vaovao namboarin'ireo mpifaninana noana toa an'i Garmin.
Na eo aza ny fijanonana virtoaly manerantany vokatry ny coronavirus, ny tsenan'ny smartwatch nitombo 20% raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa, izay adika ho maodely 14 tapitrisa amidy nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020. Antenaina fa ho an'ny telovolana faharoa dia hihena izany fitomboana izany mandra-pahatongan'ny fampidirana ireo modely vaovao kasain'ny mpanamboatra lehibe hatao eny an-tsena .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung no mpanamboatra smartwatches faharoa lehibe indrindra nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2020
Huawei's MatePad T8 lalina: ny zavatra rehetra atolotray ity takelaka takatry ny saina ity
Sandship: Crafting Factory no freemium "Factorio" ho an'ny Android